Kutheni amabakala abantwana engeyiyo eyona nto ibalulekileyo | Bezzia
Kutheni amabakala abantwana engeyiyo eyona nto ibalulekileyo
UToñy Torres | 25/05/2022 20:00 | Ingcebiso koomama
Xa unyaka omtsha wesikolo sele uza kuphela, lixesha lokufumana nokuvavanya amabanga oyikekayo, loo mabanga Banokwenza umonakalo omkhulu kukuzithemba kwabancinci ukuba azimkelwanga kakuhle. Ngenxa yokuba umzobo omnye, inani elilula elinxulumene nesifundo, alanelanga ukugqiba ukuba yintoni umgudu oye waba khona ngexesha lekhosi.
Ngubani omnye kwaye ngubani ongaphantsi oye watyhubela ukubandezeleka kokungcakaza yonke into ngenqaku elinye, into engalunganga ngokwenene, ngakumbi xa kufikwa kubantwana. Kuba kwiziphumo zeemviwo kufuneka songeze umgudu owenziweyo, iiyure zokusebenza ekhaya, ukuzincama kokushiya ezinye izinto ezonwabileyo ukwenza imisebenzi kunye nomsebenzi wasekhaya. Umzamo weenyanga ezininzi nto leyo enokuthi ijongelwe phantsi ukuba kuphela ngamanqaku okugqibela athathelwa ingqalelo.
1 Amanqaku ayingowona abalulekileyo
1.1 Athini amanqaku ngobuntu babafundi
1.2 Indlela ibaluleke ngaphezu kwenjongo
Amanqaku ayingowona abalulekileyo
Nangona eyimfuneko ekuvavanyeni abantwana, amabakala awabalulekanga kakhulu kuba kwiimeko ezimbalwa kakhulu abonisa umgudu wokwenene womfundi. Ukuze ufike kumabanga okugqibela kufuneka uchithe iintsuku ezininzi zokufunda, izifundo ezininzi maxa wambi ezingaqondwa kakuhle. Iintsuku apho abafundi baye bangabikho ngeengqondo, bethwele iintloko kwezinye izinto, bekhula, bephuhlisa ubuntu babo, bengakwazi ukungazihoyi izifundo zabo.
Ebudeni bezo nyanga amakhwenkwe namantombazana achitha ixesha elininzi elungiselela kwaye efundisisa kwaye xa usuku loviwo lufika badlala yonke into kwikhadi elinye. Into engalunganga ngokuyinxenye, kuba ngaloo mini banokuba novalo ngakumbi, benengxaki yoxinaniso, basenokuba balele kakubi okanye abayazi indlela yokuqhuba uviwo. Y elo bakala balifumanayo, alibonakalisi wonke loo mzamo kwaphela oluthi ke lungabi namvuzo ufanelekileyo.
Kuzo zonke ezi zizathu, amabakala abantwana asiyonto ibalulekileyo. Ziyindlela nje yokulawula ukufunda ngenkqubo ekulula ukuyiqonda phakathi kwabazali nootitshala. Kwakhona akukubi ukuba abantwana baqonde oko ibakala elibi sisiphumo esibi, ukuba basebenzele ukuyiphucula baze babafundise eyona ndlela ilungileyo yokuyenza.
Athini amanqaku ngobuntu babafundi
Amanqaku omfundi anokukunceda ukuba ufunde okuninzi malunga nobuntu bomntwana wakho kunye nophuhliso. Ngokukodwa kwimeko yabafana abafikisayo abaqala ukwenza isangqa sabo sentlalo, ukuba babe nomdla wabo kwaye basendleleni eya kwikamva labo lobuchwephesha. Inkwenkwe ehlala izisa amanqaku aphezulu kakhulu, inokubonisa ingxaki yokuzibhokoxa kakhulu. Akachithi xesha kwezinye izinto, akahambi nabahlobo, akanxibelelani, le yimizekelo nje yemibandela ekufuneka ilawulwe ukuze kuthintelwe abantwana ukuba bangabinangxaki nezifundo.
Kwelinye icala, kwiingcali, oko kuthethwa ngamanye amanqaku ajikelezayo, kubonisa ukuba umfundi uyasebenza, ufunda ukuze aqhube izifundo zakhe. Kodwa zikwabonisa ukuba unezinye izinto ezikuxhalabisayo, uchitha ixesha usenza eminye imisebenzi, izinto owazithandayo kunye nobomi basekuhlaleni. Ngokuqinisekileyo, umfundi unobomi obuqhelekileyo apho izifundo ziyinxalenye esisiseko, kodwa abacingi ukuba kukho into ebaluleke kakhulu.
Indlela ibaluleke ngaphezu kwenjongo
Isikolo ngumsebenzi wabantwana, kuyimbopheleleko yabo ukufunda izinto ezininzi kwaye baqeqeshe ukuba nobomi obusemgangathweni babantu abadala. Nokuba yeyiphi na indlela abakhetha ngayo, ukuba bayathanda kufunda okanye akunjalo, ukuba abanamnqweno wokufunda eyunivesithi okanye umsebenzi wobugcisa. Imfundo yinxalenye ebalulekileyo yophuhliso lomntwana kwaye kufuneka bazi ngayo.
Kodwa imbono akufanele ishiywe ngaphandle, ixabiso lokwenene lomntwana, ngumzamo, umsebenzi owenziweyo, umnqweno wokuphucula kunye nokufuna ukuhlala usenza ngcono. Wonke loo mgudu yeyona nto abazali bafanele bayixabise ngokwenene ekupheleni kwesifundo. Ngokuba indlela ibaluleke ngaphezu kwenjongo kwaye ke ngoko, amabakala abantwana asiyonto ibalulekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Ingcebiso koomama » Kutheni amabakala abantwana engeyiyo eyona nto ibalulekileyo
Ukusikelwa umda kwezithuba kubudlelwane besibini
Fumana umhleli omtsha kaMassimo Dutti: Ngokukhanya